HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး16 BursaBursa စီးတီးဆေးရုံကနေဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုကိုစတင် MustafaKemalPasa
30 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 16 Bursa, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
န်ဆောင်မှုများစတင်မြို့တော်ကိုဘတ်စ်ကားမှဆေးရုံကနေ MustafaKemalPasa ပညာသင်ဆု
Bursa စီးတီး MustafaKemalPasa ဆေးရုံကနေဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ Bursa Mustafakemalpaşaခရိုင်ကနေစီးတီးဆေးရုံသို့တိုက်ရိုက် access ကိုစတင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံသားများ 801 / T ကလိုင်းဝန်ဆောင်မှုထဲသို့သွင်းထားခဲ့ပါတယ် enable လုပ်ဖို့အဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေး Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်BURULAŞသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ။
ဘုတ်အဖွဲ့အားဖြင့်သြဂုတ်လအတွင်းခေါ်ဆောင်သွားဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအောက်ပါ ukome terminal ကိုနှင့် Bursa Bursa မြို့ဆေးရုံအကြားဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုစတင်ရန်Mustafakemalpaşa။ ကို T-LINE ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုနှင့်ရေတွက် 801 / 14 ရက်ပေါင်းဖွဲ့စည်းပါလိမ့်မည်။
ဘတ်စ်ကားMustafakemalpaşa Terminal နှင့် - Bursa CAD ။ - Balikesir Bursa လမ်း - Bursa Beltway - အစ္စတန်ဘူလ် CAD ။ - Terminal နှင့် CAD ။ - Bursa Terminal နှင့် - လမ်းကြောင်း Bursa စီးတီးဆေးရုံကြီးကိုလိုက်နာပါလိမ့်မယ်။
မြို့ဆေးရုံဘတ်စ်ကားန်ဆောင်မှုများကို start ကနေ Ulukent 14 / 05 / 2019 Elazığမြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာနအာဇာနည်ဗိမာန် Fathi Seki စီးတီးဆေးရုံသို့တိုက်ရိုက်ပျံသန်းမှုစတင်ဖန်ဆင်းရပ်ကွက်အတွင်းပြေးဆွဲမှုမရှိ Ulukent ဘတ်စ်ကားများကတည်းဖြတ်အချိန်နာရီအတွင်း။ ဘာသာရပ်အပေါ်Elazığမြူနီစီပယ်ကနေကြေငြာချက် "မြို့တော်ဝန် Sahin Şerifoğullarıသွန်သင် Ulukent ရပ်ကွက်အတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဇာနည်ဗိမာန် Fathi Seki စီးတီးဆေးရုံများတွင်တိုက်ရိုက်လေယာဉ်ခရီးစဉ်အပေါ် 13 မေလတွင်။ Ulukent ရက်အတွင်းဆေးရုံ5အချိန်စုစည်းဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရပ်ကွက်အတွင်းမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘတ်စ်ကား, တနင်္လာနေ့အဖြစ်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာ Elazig ဆရာများဘတ်စ်ကားဆေးရုံသွားပါလိမ့်မယ် အိမ်တော်မျက်နှာစာကနေရွှေ့မည်။ အဆိုပါလေ့လာရေးခရီးများစတင်နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏တိတ်ဆိတ်ရပ်ကွက်အတွင်းအဓိကပြဿနာပြေလည်ခဲ့သည်။ ဆေးရုံအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သိပ္ပံရေးရာညွှန်ကြားမှုလမ်းကြောင်းကိုအားဖြင့်သစ်တစ်ခုဇုန်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းဖွင့်လှစ် ...
Bursa ဘတ်စ်ကား Terminal နှင့် Aesthetic Touch ကိုMustafakemalpaşa 26 / 01 / 2019 မျက်နှာကြက်မှကြမ်းပြင်အားဖြင့်ပြန်တမ်းတနှစ်တွင် xnumx'l ဘတ်စ်ကား terminal ကိုမြို့တော်မြူနီစီပယ်တစ်ပွညျ့စုံတည်းဖြတ်မူနှင့်အတူခေတ်မီကြည့်ရရှိသွားတဲ့ကတည်းကအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင် Bursa Mustafakemalpaşaခရိုင်, ။ တစ်ဦးကအနာဂတ်စီမံကိန်းအတွက်သူကိုအရအသက်ကိုရစေခြင်း Bursa တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်၏တစ်ဖက်ကနေရွှေ့မည်, အခြားလက်တွင်, ခရိုင်၏အများပြည်သူဒေသများရှိ 1990 အသက်တာ၏အရည်အသွေးကိုမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်မရပ်မနားအလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ Mustafakemalpaşaခရိုင်ကိုလည်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 17 နှစ်ပေါင်းလည်ပတ်ခြင်းနှင့် terminal ကိုအဆောက်အဦများနှင့်သက်တမ်းတိုးတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်လစျြလြူရှုခဲ့ကြောင်းတောင်းဆိုဖို့အချိန်ကိုကျော်ထွက်ဝတ်ဆင်။ မြေပြင်ကနေအိမ်ခေါင်မိုးမှMustafakemalpaşaဘတ်စ်ကား Terminal နှင့်ဖွငျ့ operated Burulaşလိမ္မာပါးနပ်သည်, အပြင်ပန်း၎င်းတို့၏ဈေးဝယ်နစ်အထိလုံးဝပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့ပါတယ် waterproofing ။ ဒါဟာမြို့ကမှလာမယ့်တာဖြစ်ပါတယ် ...
Eskisehir စီးတီးဆေးရုံသစ်ဘတ်စ်ကားလမ်းကြောင်း 01 / 02 / 2019 နိုင်ငံသားများ၏တောင်းဆိုချက်များနှင့်အညီEskişehirတဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဆေးရုံTepebaşıခရိုင်အကြားအသစ်တခုဘတ်စ်ကားလမ်းကြောင်းဖန်တီးထားသည်။ တနင်္လာနေ့, ဖေဖေါ်ဝါရီလ42019 နီအမှတ် 45 လိုင်းနှင့်အတူပြုမူတံ့သော 51 မိနစ်ကြားကာလမှ, Espark ဓါတ်ရထား Stop 6.20 များ၏ရှေ့မှောက်၌နာရီတစ်ကြိမ်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ အနီရောင် 6.45 သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက် xnumx't အထိသုံးစွဲဖို့နိုင်တော့မည်ဖို့စီးတီးဆေးရုံကနေမြို့လယ်သို့ပြန်လာချင်သူနိုင်ငံသားတွေ။ ဧဒုံလိုင်းလမ်းကြောင်းအမှတ် 51 စီးတီးဆေးရုံကြီးသို့ပြန်သွား: ပထမဦးစွာထွက်ခွာ Espark ဓါတ်ရထား Stop Pre-Ismet Inonu 51 Cad.- Esgaz Inc က - Tepebasi မြူနီစီပယ် - Ismet Inonu 1 cad.-a.ü. ဆေးဝါးဌာန။ ဂိတ်-Saleh Bozoklar Cad. -ယူနွတ် Emre ...
Mersin စီးတီးဆေးရုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိစ္စများမှသည် Kocamaz စွပ်စွဲချက်မှတုံ့ပြန်မှု 01 / 06 / 2018 Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကွန်ဂရက်နှင့်စီးတီးဆေးရုံ Kocamaz ကသမ္မတကိုဒုက္ခကြုံနေရသည်ဟုတောင်းဆိုမှုများကိုတုံ့ပြန်ရန် Mersin သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ပြပွဲ Center မှာကျင်းပသည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲများတွင် "Mersin စီးတီးဆေးရုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်ပါသည်အစဉ်မပြတ်ဖြစ်ပါတယ်" မကြာသေးမီကာလ၌သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌သင်မြို့တော်ဝန် Burhanettin Kocamaz dedi.m နှင့်အများပြည်သူတွင်တည်ရှိသည် Mersin ပြသနိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့သောသတင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ယူပြောသောအဖြစ်မြို့ဆေးရုံနှင့် Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာများကြုံနေရသည်။ အဆိုပါနေ့ကသူတို့စွပ်စွဲအဖြစ်သူတို့ကသမ္မတ Kocamaz ကိုယ်စားသူတို့ရဲ့အလုပ်ထုတ်သယ်ဆောင်ကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြဿနာများကိုတမြို့ဆေးရုံမှဝင်ရောက်ခွင့်အသီးအသီးကိုဖြေရှင်းဖို့, အသွားအလာပြဿနာများကိုဖန်တီးဖို့မစဉ်ကတည်းက Mersin အတွက် Mersin တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ဆီသို့ရောက် လာ. , ...
စိတ်သက်သာရာအတူ Bursa တဲ့ Metropolitan City, ဆေးရုံသို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 10 / 06 / 2019 Bursa တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Alinur Aktas, တူရကီနိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးဒီနှစ် 10 ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် Bursa ၏ပစ်မှတ်ထားဖွင့်ပွဲအကြားစာရင်းကိုလည်းသူကလျင်မြန်စွာလမ်းမြို့ဆေးရုံကြီးမှဝင်ရောက်ခွင့်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အလုပ်ဖြစ်တယ်ယူကဆိုသည်။ အဆိုပါ Bursa စီးတီးဆေးရုံကြီးမှဝင်ရောက်ခွင့်လွယ်ကူချောမွေ့ Bursa တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Alinur Aktas, အလုပ် site ကိုလမ်းပစ်မှတ်ထားဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးအရာရှိတွေနှင့်အတူသမ္မတဦးသိန်းစိန် Aktas သည်, မွန်းလိုက်ပါသွားသော AK ပါတီ Nilufer ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌ Ufuk ပြန်လည်သုံးသပ်, Nilüferဖှဲ့စညျးစက်မှုဇုံ (NOSAB) ကကတ္တရာ applications များ၏အချိန်မှာကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Aktas Bursa များ၏ကျန်းမာရေးကိုနီးကပ်စွာဆက်စပ်တစ်ပတ်လမ်းကိုစစ်ဆေးခြင်းအလုပ်, "၏ပထမဆုံးနေ့နှင့်အတူစတင်မနက်စောစော Al-Fitr ပြီးနောက်" NOSAB အနားယူပါလိမ့်မယ် " ...
မြို့ဆေးရုံဘတ်စ်ကားန်ဆောင်မှုများကို start ကနေ Ulukent
Bursa ဘတ်စ်ကား Terminal နှင့် Aesthetic Touch ကိုMustafakemalpaşa
Mersin စီးတီးဆေးရုံသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိစ္စများမှသည် Kocamaz စွပ်စွဲချက်မှတုံ့ပြန်မှု
Access ကိုလမ်းမယာဉ်အသွားအလာ Bilkent စီးတီးဆေးရုံကြီးဖွင့်လှစ်
အတ္တ Solutions ၏ဆေးရုံတူရကီပေးနေတာမှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး